Neymar Jr oo si maldahan u muujiyey kooxda uu doonayo inuu ku biiro Real Madrid iyo Barcelona isagoo isticmaalaya Instagram – Gool FM
(Paris) 26 Agoosto 2019. Ciyaaryahan Neymar Jr ayaa si maldahan u muujiyey kooxda uu doonayo kooxda uu ku biirayo Real Madrid iyo Barcelona, isagoo isticmaalaya bartiisa Instagram-ka.
Neymar waxa uu tilmaamay inuu jeclaan lahaa inuu ku biiro kooxda Barcelona xagaagan kaddib markii uu like saaray ama jeclaysatay sawirro badan oo ku saabsan kooxda Barca oo la soo dhigay barta Instagram-ka.
Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa bartanka uga jira dagaal dhanka suuqa kala iibsiga ah oo u dhaxeeya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid xagaagan, waxaana arrintiisa la soo gabagabayn doonaa todobada maalmood ee soo aaddan.
Neymar ayaa seegay kulankii xalay ay kooxdiisa Paris Saint-Germain 4-0 kaga adkaadtay naadiga Toulouse, isagoo xitaa aan tagin garoonka naadigiisa ee Parc des Princes.
Laakiin taasi bedelkeeda Neymar waxa uu u muuqday mid si dhow ula socday xalay kulankii Barcelona ay 5-2 uga adkaatay Real Betis, kaasoo uu Antoine Griezmann uu labo jeer shabaqa soo taabtay, halka goolasha kale ay dhaliyeen Carles Perez, Jordi Alba iyo Arturo Vidal.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona Neymar ayaa like saaray sawirro uu Instagram soo dhigay Griezmann oo u dabaal dagayey goolashiisii ugu horreeyey ee Barcelona si la mid ah sawirrada Sergi Roberto kaasoo isna la dabaal-degayey laacibka reer France.
Jariiradda AS ee dalka Spain ayaa shaacisay in arrintaan uu sameeyey Neymar loo arki karo inuu doonayo inuu dib ugu laabto garoonka Camp Nou labo sanadood kaddib markii uu lacag rikoorka adduunka ah oo dhan 222 milyan oo euro ugu wareegay dhinaca naadiga PSG.
Miyuu Mauro Icardi sii joogayaa kooxda Inter Milan?... (Wakiilkiisa ahna xaaskiisa Wanda Nara ayaa ka jawaabaysa)